Vaovao - mandray anjara amin'ny fampirantiana ny teknolojia momba ny teknolojia Bangladesh momba ny tisu sy faha-4 ny SICER.
SICER dia mandray anjara amin'ny Fampirantiana Teknolojika Taratasy faha-4 any Bangladesh sy ny Tissue Technology.
Tamin'ny 11-13,2019 aprily, ny ekipa fivarotana an'i Shandong Guiyuan Advanced Ceramics Co., Ltd. tonga tao Dhaka, renivohitr'i Bangladesh, manamorona ny "Belt and Road" handray anjara amin'ny Fampirantiana ny Teknolojika Taratasy sy Tissue Teknolojia faha-4. Ny fampirantiana no hany fampirantiana orinasa mpanao polipola sy taratasy eto Bangladesh. Ny fampirantiana dia nampivondrona orinasa 110 miaraka amin'ny fitaomana sy famoronana eo amin'ny sehatry ny taratasy ka nahasarika mpitsidika an'arivony.
Mbola vao manomboka ny indostrian'ny taratasy any Bangladesh, ary ny indostria iray manontolo dia somary nihemotra raha oharina amin'ny firenen-kafa.
Ny famokarana sy ny kalitaon'ny vokatra dia samy tsy mahazaka ny fangatahana ary mitaky fanafarana lehibe. Amin'izao fotoana izao, miasa mafy ny governemanta amin'ny fanatsarana ny fotodrafitrasa sy ny fampandrosoana ara-toekarena, ary ny indostrian'ny taratasiny dia hanana fivoarana azo antoka.
Amin'ny maha marika fanta-daza azy amin'ny indostrian'ny fitaovana fanaovana papermaking ao an-toerana dia sambany nandray anjara tamin'ity hetsika ity i Sicer. Izy io dia fampisehoana mivangongo ireo singa dewatering amin'ny seramika vaovao manokana toy ny silida nitride, zirconia ary submicron alumina, ary koa ireo faritra vita amin'ny seramika tsy mahazaka ho an'ny milina taratasy. Tamin'ny fampirantiana dia mpivarotra maro avy any India, Bangladesh, Indonezia ary Sina ary firenena hafa ary firenena maro no tonga teo amin'ny booth. Ao amin'ny sehatry ny fifampiraharahana amin'ny asa aman-draharaha, ny marketing sy ny teknika dia mampahafantatra tsara ny zava-bita sy ny toetra teknikan'ny vokatra amin'ny orinasa amin'ny mpanjifa ary mamaly amin'ny antsipiriany ireo fanontaniana.
Shandong Guiyuan Advanced Ceramics Co., Ltd dia manam-pahaizana manokana amin'ny fikarohana, ny fampandrosoana, ny famolavolana ary ny fampiharana ireo fitaovana tsy metaly tsy metaly mandritra ny 61 taona ary manana zon'ny fananana ara-tsaina tsy miankina ho an'ny singa dewatering amin'ny seramika. ny toe-javatra eo amin'ny tsenan'i Bangladesh, mampitombo ny fahafahan'ny tsena, manararaotra fotoana ary miara-mandroso.